Guangdong Giant Fluorine Energy Saving Technology Co., Ltd dị na Dongguang City bụ ụlọ ọrụ na-eme nchọpụta kemịkal na mmepe, n'ichepụta ihe, ndị na-ahụ maka ngwa ọrụ fotoelectric, atụmatụ ọrụ nka bụkwa otu n'ime ụlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe.
N'ihe banyere ihe eji eme kemist na nanomaterials , ụlọ ọrụ ahụ agbakwunyere naanị ndị nnọchi anya nke ụdị ama ama na ụlọ na mba ofesi. O nwere ike inye nnweta ihe ọmụmụ mbụ na nkwado teknụzụ maka ọgwụgwọ elu. Companylọ ọrụ ahụ agbasiri mbọ nyocha ma mepụta ogige fluorocarbon , ọkụ ọkụ mbufe ọkụ fluorocarbon , imepụta na ire nke mmiri ọkụ mmiri nanoscale atọ ma gbasaa mpaghara ngwa nke ụlọ ọrụ dị elu; A na-eji usoro ikuku na-ebufe Fluorocarbon na ume ọhụrụ , mpaghara aku na uba ohuru na okpomoku okpomoku nke ulo oru agha, nke mejuputara ikike di egwu na mbelata ike. Karịrị usoro ntụgharị ọkụ anyị nke TUW-HYM-47, na-agbanwe ntụgharị mmiri nke mmiri na-etinye aka na sava etiti data, na-enweghị mkpa maka ikuku ikuku na ime ụlọ nju oyi, belata ike oriri, erughị 1.1 PUE. Tụnyere ikuku ikuku ọdịnala, ọ nwere ike ịchekwa ike karịa 85%. A ga - etinye usoro ihe ndị a n'ọbara maka ikpo ọkụ na ikpochapụ ọkụ nke ụgbọ elu ọkụ eletriki inverter, batrị lithium batrị, ikuku ikuku, osisi ọkụ nuklia, igwe ndị na-egwu ala, ọkpọ ọkụ ike UHV na sistemụ radar agha.
Site na mmepe nke azụmaahịa, ụlọ ọrụ ahụ azụlitere ndị ọkachamara, ndị tozuru oke ma nwee ogo dị elu, na-agbaso echiche nke "ịmepụta uru maka ndị ahịa", na teknụzụ ohuru na ezi obi iji nọgide na-akwalite asọmpi nke ụlọ ọrụ, ịmepụta ọnọdụ mmeri na ndị ahịa, nye ndị ahịa ngwaahịa na ọrụ asọmpi site na ọwa ozi mgbasa ozi na echiche mmepe ahịa pụrụ iche.
Ụdị ahịa : Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company , Agent
Ọdịnayaahịa : New-type Chemical Material , Other Chemicals , Organic Intermediate
Ngwaahịa / Ọrụ : Fluorocarbon Refrigerant , Ihe ngwọta Fluoride , Hydrofluoroether , Agba ink na-ebi akwụkwọ UV , AF-mkpuchi , Ngwọta mbụ na mkpịsị mkpịsị mkpịsị aka
Ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ : 5~50
Isi ego (nde US $) : 1000000
Emezuru afọ : 2013
Akwụkwọ : MSDS
Adreesị ụlọ ọrụ : Room 401 Building 2 No. 51 Bihu Dadao Fenggang Zhen Dongguan City GUangdong, Shenzhen, Guangdong, China
Mbịakọta Mbịakọta Kwa Afọ (US $) : US$2.5 Million - US$5 Million
Mbupu Ịzụta Mbịakọta (nde US $) : Below US$1 Million
Ahịa isi : Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide
Ọnọdụ mbubata na mbupụ: Ọpụpụ site n'ụlọnga
Mba nke Production Production :3
Mba nke QC ọrụ :Fewer than 5 People
Ebe obibi Ụlọ ọrụ :Dongguan
Fluorocarbon Refrigerant Ihe ngwọta Fluoride Hydrofluoroether Agba ink na-ebi akwụkwọ UV AF-mkpuchi Ngwọta mbụ na mkpịsị mkpịsị mkpịsị aka Fluorocarbon Refrigerant ume Liquid Fluorocarbon Refrigerant